MUQDISHO MAAMUUSKEEDII DIB
MA ULA SOO NOQON?
“Dunida oo dhammi maanta dawladda cusub bay isha ku haysaa, dawladdiina Xamar bay fiirinaysaa, Xamarna fadhashada xabaalihii Tanyaanigay ku mashquulsantahay.”
Muqdisho iyo barisamaadkii
Muqdisho ama Xamar waa magaalo qadiim ah oo taariikh dheer leh. Waxay ka mid ahayd magaalo qaramadii ka aasaasmay xeebaha bariga Afrika ee ku dherersan Bad weynta Hindiya.
Wixii ka dambeeyay dagaal weynihii 2aad ee addauunka waxay noqotay goobta laga hago dhaqdhaqaaqii xornimo doonka iyo wadaniyadda Soomaaliyeed ee ay saldhigga u ahayd aragtidii Soomaali weyn.
Xornimadii iyo Israacii 1dii Luulyo 1960 labadii gobol ee Soomaaliyeed ee ay Ingriiska iyo Talyaanigu kala gumaysan jireen ka dib waxay notay caasimaddii Jamhuuriyaddii Soomaaliya.
Xilligaa wixii ka dambeeyay waxay ahayd magaalo uu qof wal oo Soomaaliyeed ku soo hirto. Waxay ahayd astaanta midnimada iyo qaranimada Ummadda Soomaaliyeed.
Waxay ahayd ilays ay soo bidhaansadaan Soomaalidii kale ee ku harsanayd gacanta gumaysiga iyo goob ay ka fiirsadaan rajada mustaqbalkooda. Waxay ahayd muraayad ay dunidu ka daawato dalka intiisa kale.
Waxay ahayd goobtii laga hagi jiray siyaasadda dalka , xaruntii dhaqaalaha, maaliyadda iyo waxbarashada ee Soomaali oo dhammi wixii ay hanti iyo maal lahayd gashatay.
Kii dalka ka shaqaysta, kii dibad ka soo xoogsada iyo kii hantida ummadda xadayba waxay taladoodu ahayd Xamar.
Waxay ahayd goob dadkeedu ku caan baxay darisnimo wanaag , sharci dhawris iyo nabad jacayl.
Waxay ahayd meel ay dawladihii kala dambeeyay ee dalka soo maray ay uga eexdeen wadanka intiisa kale oo wixii uu hanti iyo maal qaranku lahaa la geliyay.
Waxaa la cuna qabateeyay dhammaan Magaalooyinkii kale ee dalka iyadoo adeeg walba oo dawladeed iyo mid gaar ahaaneedba Xamar lagu koobay.
Kii waxbarasho sare raba, kii Baasaaboor raba, kii inuu wax maal gashado raba iyo kii sar qurux badan inuu dhista raba intaba waxaa la yidhi meel aan Xamar ahayn maya.
Arimahaas aan kor ku soo xusnay ayaa waxay sababeen in dadkii ku noolaa gobolada ay khasab ku noqotay inay sida daadka ugu soo qulqulaan Caaasimadda.
Dalkii wuxuu noqday Xamar oo qudha, Xamarna waxay noqotay dalkii oo dhan.
Xabbad keentay iyo xabbad Sugto
Xaaladda wadanku waxay ahayd xiliyaddii dambe mid maalinba maalinta ka dambeysa ka sii daraysa ayadoo ay colaad iyo dagaalo sokeeye ka qarxeen meelo badan oo wadanka ka mid ah, haba ugu sii darradaan kuwii gobolada waqooyi ka aloosmaye.
Xaaladdaas colaadeed ayaa si weyn looga dareemay Xamar. Dadkii ay dagaaladaasi soo bara kiciyeen ayaa iyagoo raxan raxan ah soo galay Xamar. Reer Muqdisho waxay dadkaas qaxootiga ahaa ku magacaabeen Xabbadi keentay, inkastoo ay iyaga qudhoodu ahaayeen xabbad sugayaal.
Xabaddaas ay dadka reer Muqdisho mudada sugayeen ayaa waxay ka dul yeertay maalmihii ugu dambeeyay sannadkii 1990 oo ay colaaddii hore u soo galaafatay gobaladu ugu dambaystii Xamar soo caga dhigatay.
Waxay ku waabariisteen belaayo qayrkood hore u soo dubatay oo ay muddo sheedda ka daawanayeen oo aanay ka sii tabaabushaysan.
Dagaal la filayay in dawlad xukun lagaga tuuro ayaa isku bedelay mid ay dadkii dariskaa ahaa isku gummaadaan. Qofku inuu reer hebel yahay ayaa dambi noqotay sidii horeba uga dhacday meelo kale oo dalka ka mid ah, markaasaa dil, kufsi iyo bililiqo lagu bilaabay.
Dhawaaqa rasaasta ayaa si aan kala go’o lahayn hadh iyo habeen ka yeerayay Magaalada.
Mar keliya ayaa dhalintii saaxiibadda ahaa, isku meesha ku dhashay, kuna soo wada barbaaray ee hore isku yiqiin ciyaala Shibis, Boondheere, Hodan iwm ay sida bur iyo biyo u kala soocmeen.
Gabar markii ay soo qaxaysay cunug yar ahayd ayaa iiga sheekaysay maalintii caruurii ay deriska iyo saaxiibada ahaayeen isugu dambaysay. Waxay tiri markii xabaddii kala joogsan weyday ayaa reerkayagii go’aansaday inuu qaxo. Baabuur yar oo xaajiyad ah oo aanu lahayn ayaanu subixii alaabadii wixii aanu qaadan karaynay ku guranay. Reerihii deriska iyo caruurtii aanu saaxiibka ahayn ayaa nagu soo ururay oo alaabta nala gurayay.
Gabar iga yarayd oo aanu walaalo nahay ayaa aabahay weydiisay su’aashan:-
Aabo adeer Cali iyo caruurtiisu miyaanay ina raacayn? Naa adeer cali lahayne naga aamus ayaa aabahay ugu jawaabay!. Waxay ahaayeen reer aanu deris ahayn inta aan xasuusnahay. Labada odey saaxiib walaalo oo kale ah ayay ahaayeen, waxaanuna u naqaanay adeer Cali.
Hadaba sida aad ka dhadhansan kartid sheekadan gaaban gabadhaasi yari way garawsan weyday sababta reerihii deriskoodu isaga joogaan ee ay iyagu hoygoodii, hantidoodii iyo asxaabtoodii uga tagayaan.
Waxaa la yaab ku noqotay waxa xabadda ay iyagu ka cararyaan ay adeer Cali iyo reerkiisu u dugsanayaan.
Nasiib darro inkastoo reerahaasi waalidkeed iyo walaalaheed oo kale ay ahaayeen, hadana qabiil si foolxun loogu adeegtay ayaa kala geeyay. Sidoo kale wiil iyo abtigii iyo xataa haweenay iyo saygeed ayaa la sheegaa inay kala irdhoobeen..
Xabaashii masaakiinta iyo xeradii Mooryaan
Waxaa mar keliya lumay amarkii iyo kala dambeyntii. Waxaa boob iyo bililiqo loogu dhaqaaqay hantidii dawladda, safaaradihii iyo tii shacabkaba. Isbitaal. Dugsi iyo xafiis dawladeed midna looma aabbo yeelin. Sidii ayax geed ku degay ayaa maalmo ka dib meel walb daaqaduhu is garaacayeen, inkastoo markii dambe daaqad.albaab, jiingad, musqul iyo marmar midna aan la dhaafin.
Falalka bililiqada waxaa barbar socday kuwo lagu ugaadhsanayo beelo gaar ah iyo dadka masaakiinta ah ee aan hubaysnayn. Waxaa dhegta dhiigga loo daray biri ma geydadii. Dumar, waayeel, caruur, culumo iyo aqoonayahan lama kala soocin.
Mar keliya ayaa dariiqyadii bacaadka ahaa iyo beerihii nasashadu isu bedeleen xabaalo.
Masaajidadii ayaa lagu nabad geli waayay. Kuwii isku dayay inay cid magan geliyaan ayaa iyagii naftoodii ku waayay ama halis ay ku gashay.
Waxaa bilaabmatay marxaladdan fawdada.Waxaa qiima beeshay naftii bani’aadamka.
Dilka ayaa wuxuu ka mid noqday nolosha caadiga ah, qoriguna wuxuu noqday shayga keliya ee lagu caano maalo.
Wixii aan USC iyo taageerayaasheeda ahayn ayaa mar keliaya laga sifayeeyay Caasimaddii Qaranka oo isu bedeshay xero qabiil. Qabyaaaladdu waa masiibo aan xad lahayn. Waxay xaaladdu ka sii dartay markii intii shalay meesha ka soo wada jeeday ay iyagii isku jeesteen.
Waxaa bilaabmay dagaal aan hore loo arag, burbur iyo barakac cusub. Madfac aan loo aabo yeelin ayaa masaakiin badan galaaftay. Xamar waxay noqotay meesha adduunka ugu khatarsan, iyadoo xuduudo la kala dhex dhigay xaafadihii magaalada..
Dagaal ooge, Wadaad iyo Ganacsato intuba waxay samaysteen maleeshiyooyin hubaysan. Waxaa inta dheer Mooryaanta aan cidina xukumin ee afduubka masaakiinta iyo dilka ku ceesha.
Dhismayaashii quruxda badnaa ee habka Talyaaniga u dhisnaa ee magaalda hoose(down town) ayaa dhulka lala simay. Xafiisyadii dawladda, Hoteeladii caanka ahaa, goobihii ganacsiga iyo kuwii madadaaladu waxay dhammaantood maanta noqdeen kharaabado ay bahaladu u hoydaan. Meelaha qaarkoodna inta dhirtu is qabatay ayaa geela iyo adhiga lagu raacdaa.
Waxaa markii ugu horeysay taariikhda la is weydiiyay in Muqdisho caasimad sii ahaan karto iyo in kale, iyadoo dad badanina qabaan in Muqdisho ay lumisay maasuuskii caasimad lagu yiqiin.
Waxay noqotay goob dadka qaarkii marka ay magaceeda maqlaan ay murugo la tiicaan, indhahoodana ay ilmadu ka tifiqlayso. Waxay noqotay goob lagu xasuusto wixii xumaan iyo dhibaato Soomaaliya ka dhacay oo qaarkood marka ay dhagahaagu maqlaan aadan rumaysan karin.
Xamar waxay noqotay dhibaatada Soomaaliaya, dhibaatada Soomaaliyana waxay noqotay Xamar.
Muddo laba sanno ka badan shir nabadeed soo jiitamayay ka dib waxaa Soomaaliya wadanka Kenya loogu soo yagleelay dawlad baaxad weyn oo ka kooban 271 Xildhibaan oo ay ka mid yihiin tiro wasiiro ah oo boqol ku dhaw.
Waa xildhibaano iyo wasiiro ooman oo miciyaha wada lisanaya Muqdishana inay soo dhawayso laga sugayo.
Hogaamiyaha kooxdan mudane C/laahi Yuusuf ma ahan ninkii ugu horeeyey ee burburkii Soomaaliya ka dib Madaxweynenimo wadanka dibaddiisa loogu soo caleemo saaro, hase yeeshee hal shay ayuu kaga duwanyhay kuwii ka horeeyay taasoo ah isagoo aanay beeshiisu degin Xamar oo haba yaraatee aan wax taageerayaal ah ku lahayn.
Waxay isaga iyo xukuumadda uu madax weynaha ka yahayba ka maageen ku noqoshada Xamar. Waxay u arkeen goob sida ay hadda tahay aanay suurto gal ahayn in dawladi soo gacaga dhigan karto.
Madaxweyne C/laahi yuusuf waa nin ay beelaha USC aad uga shakisanyihiin doorashadiisuna ay ku noqotay filanwaa iyo guul darro la soo daristay hogaamiyeyaashoodii.
Dad badan oo Xamar ku nooli waxay u arkaan C/laahi Yuusuf cadaw ay hore isaga xoreeyeen oo dib ugu soo noqonaya. Kuwa badan ayaa qaba inuu yahay nin aargoosi u socda, waxaanu shakigaasi cirka isku sii shareeray ka dib markii uu codsaday in ciidamo shisheeye dawladdiisa ay mujtmaca caalamku siiba wadamada xubnaha ka ah Midawga Afrika ugu deeqeen.
Xamar waa meel ay ka taliyaan maleeshiyooyin beeleed aad u hubaysan hadday dawladdu timaadana shaki kuma jiro in ay qaar ka mid ah maleeshiyooyinkaas iyo madaxdooda magan u noqon doonto.
Hadaba arinta is weydiinta mudani waxay tahay dawlad magan ahi dal ma maamuli kartaa?
Waxaan filayaa in jawaabtu iska caddahay.Ilaahay ka sakow dawladi waa tii iyada la magan geli jiray. Waa tii dammaanad qaadi jirtay nabad gelyada qofeed iyo ta hantiyeed ee muwaadin kasta, sidaas darteed la yaab ma lahan in C/laahi Yuusuf iyo dawladdiisu aanay ku soo degdegin imaatinka Xamar.
Maanta dunidii oo dhammi dawladdan ayay isha ku haysaa, dawladdiina Xamar ayay fiirinaysaa, Xamarna bililiqada maydadkii Talyaaniga ayay ku mashquulsantahay.
Xabaal faqiddu waa dhacdo hor leh oo magac xumo iyo sharaf beel u soo jiiday Soomaali oo dhan oo loo baahanyahay in dadka reer Muqdisho ay ka dhiidhiyaan.
Guud ahaan Soomaaliya waxay noqotay cawraddii Afrika, halka ay Xamarna ka noqotay cawradii Soomaaliya
Hadaba shacabka Muqdisho ayuunbaa maanta asturi kara cawradaas, iyaga ayaana xilka ugu weyni saran yahay oo laga sugayaa in ay maamuuskii caasimadda dib u soo celiyaan si muwaadin kastaa isagoo xor ah oo dawladda iyo sharciga magan u ah uu si sharaf iyo qadarin leh ugu noolaado, haddii kale sidii uu madaxweyne C/laahi sheegay Soomaaliya Xamar oo keliya maaha.